Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: “Haacaaluun jagna, goota akka isaa miti kan ajjeese mucaakoo” – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAjjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: “Haacaaluun jagna, goota akka isaa miti kan ajjeese mucaakoo”
Artiist Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 29 galgala magaalaa Finfinneetti kan ajjeefaame ji’a har’aa ture.
Magaalaa Amboo qe’ee maatii isaatti argamuun Abbaa isaa Obbo Hundeessaa Boonsaa waliin turtii gabaabaa gooneerra.
”Mucaan koo iddoo baay’eetti ari’ee ofirraa dhoowwaa ture, gaaf sana carraatu isa gane,” jedhu. Dhiyaadhaa!
Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 29 galgala magaalaa Finfinneetti kan ajjeefaame ji’a har’aa ture. Magaalaa Amboo qe’ee maatii isaatti argamuun Abbaa isaa Obbo Hundeessaa Boonsaa waliin turtii gabaabaa gooneerra.
Haacaaluu Hundeessaa: “Mucaan koo dhugaa dubbate malee wanni balleesse hin jiru”
Oromoon goota isaa ”kabajaan awwaallachuu dadhabuun miira cabaafi salphinaa nutti uumee” jedhan hiriyyoonni artiist Haacaaluu Hundeessa.
Sirni awwaalchaa artiist Hacaaluu Hundeessaa Kamisa iddoo dhalootasaa magaalaa Ambootti bakka namoonni bebbeekamoon, aanga’oonni mootummaa olaanoo fi dinqisiifattoonni isaa biroo hin jirretti raawwateera.
Sirna awwaalchaarratti haasaa gabaabaa kan taasisan abbaan Haacaaluu Obbo Hundeessaa Boonsaa, “yaa biyyaa waanan yakke hin beeku. mucaan koo dhugaa dubbate maalee waanni balleesse hin jiru. Wanna dubbates ta’ee dhaggeeffadhe dhugaa beeku dubbate, torban isaatti ajjeechaa isaan dhaga’e” jechuun ajjeefamuun isaa badii malee akka ta’e dubbatan.
“Waanna inni yakke hanga ammaatti hin beeku. Wantiin isin kadhadhu… mucaakoo dhabeera dhiigni mucaa kootii akkanatti dhangala’ee akka hin hafne waaqa naa kadhadhaa” jedhan.
”Ennaa mucaan koo akka kana ta’us Waaqatu arge, namni hin argine dhiigni mucaakootii akkanatti akka hin hafne Waaqa kadhadhaa, Waaqatti naa boohaa”jedhan.
Ijoollummaarraa eegalee koodee artiist Haacaaluu Hundeessaa kan ta’e fi A.L.I bara 1995’tti Haacaaluu dabalatee hiriyyoota isaa 14 waliin hidhamee kan ture dargaaggoo Urgeessaa Daammanaa sirna awwaalchaa yoo dubbatu ”awwaalchi kun Haacaaluuf hin maluu” jedhe.
“Yaa uummata Oromoo, Haacaaluu har’a awwaallus Haacaaluun hin duune ni jira. Haacaaluun du’e jettanii hin boo’inaa, ofiif boo’aa.”
”Dhiira gaafa jiraa jibbanii reeffa isaatiin nagadatanii” jedhuunis qaamota sirna awwaalchaa Haacaaluu hundeessaa ‘jeeqan’ qeeqe.
“Haacaaluun kan uummata Oromoo maraa ta’ullee “bakka Daraaraa Kafanii awwaalametti haa awwaalamu, ganamas galgalas dhaqeen ilaalladha kan jedhe Haadha. “Haadha, Abbaa fi Haadha Warraa caala kan itti aanu hin jiru” jedhe.
Gareen sobaan mootummaan reeffa fudhachuu dhufe jedhanii rakkoo uumuun namni dabalataa akka ajjeefamu sababa ta’uu himuun sun soba akka ta’e dubbate.
”Kaayyoo Oromummaa sobaan hin gannus” jedhe.
Kaayyoon Oromoo fiixa ni baha jechuun kan dubbate dargaggoon kun ”mootummaanis sobaan uummata hallaayyaa buusuu akka dhaabu” gaafate.
“Goota, hayyuu fi qaroo Oromootii”
”Ani har’allee borullee nan du’aa, bakka jirtanitti Oromoof hojjedhaa…sobaan garuu waliin hin jiraannuu jechuun” miira gaabbii fi dheekkamsaan dargaggoon kuni dubbate OBN’n kallattiin tamsa’eera.
”Gumaan Haacaaluu garuu seeraanis, seenaanis karaa lixe lixxanii dachaan hin deebi’u taanaan habadan sobaan waliin hin jiraannuu” jedhe.
Haacaaluun hin duune Oromootu du’ee, salphatee jechuun sirni awwaalchaa artiisti Haacaaluu ‘akka hin mallee ta’uutti hedduu gaddu’ hime.
Bara 2010 artiist Haacaaluu Hundeessaa wajjjiin wal baruu kan dubbatu weellisaa Habtaamuu Lamuu gama isaatiin Haacaaluun ”goota, hayyuu fi qaroo Oromootii” jedha.
“Bara jalqaba wal barreerraa eegalee fedha bilisummaadhaaf qaburraa kan ka’e ani akka kanatti hin danda’uu bosonatti galeen WBO’tti makamee waan narraa eegamu godheen wareegama naan jechaa ture” jedha weellisaa Habtaamuun.
”Asuma taa’ii sagaleen loli jedheen gorsaa ture. Sagalee sana torban sadii dura naa ergee, akkan aaruufi arifadhutti silaa yoona hin gahu ture naan jechaa tures” jechuun yaadata.
Bakka Artiist Alii Birraa bu’ee waggoota 50 fi 60’f hojii aartii hojjeta jedheen yaada malee akkanatti yeroo gabaabatti lubbuun isaa dabarti jedhee hin yaadne” jedhe.
Haacaaluun Finfinneef hedduu qabsaa’aa ture dhalootni kuniis kaayyoo isaa kana galmaan gahuu qabaa jedheera weellisaa Habtaamuun.
Sochii WBO Konyaa Matakkal-Haala hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru